UBO Oman oo 4 Laga Qabtay 14 Aakhro Aaday – Rasaasa News
UBO Oman oo 4 Laga Qabtay 14 Aakhro Aaday
Jijiga, January 23, 2012 [ras] – War aanu saaka ka helay xarunta dhexe ee Booliska dawlada degaanka Somalida Ethiopia, ayaa sheegay in shalay waabarigii ay ciidamada New Boolisku qudha kaga jareen Qabriga Sheekha oo u dhaw Tuulo-Abraahiin 15 naf la caari oo ka tirsan UBO-da Jwxo-shiil.
Wararku waxay intaas ku darayaan in maali ka hore ciidanka New Boolisku gacanta ku dhigeen taliyihii kooxda watay, oo magaciisa ku sheegay Dhoombe Xirsi Alaale iyo saddex budhcad oo la socday. Nin ka mid ah saddexda budhcad ee la socday Dhoombe, ayaa dhaawac ah.
Taliyaha kooxda Dhoombe ee la qabtay ayaa tilmaan siiyey ciidanka New Booliska, halkaas oo ay saaka ku waabariisteen, kuna dileen dhamaan 15 xubnood oo ahayd budhcad uu watay Dhoobme.
UBO-da Jwxo-shiil, oo uu jab yari ka hadhay ayaa ku dhuumaalaysta maamulka Somaliland iyo xuduuda dheer ee degaanku la wadaago maamulkaas.
Warkan ka soo baxay xarunta Booliska waxaa kale oo ku qoran in maalin ka hore ay Boolisku gacanta ku dhigeen labo UBO, uu dhuumaal ku marayey aaga meesha lagu magacaabo Xero-Jaarso, kuwaas oo lagu kala magacaabo Haybe Muxxumed iyo Maxamed Abokar Nuur.
Wixii faah faahin ah ee ka soo kordha jabka UBO-da Jwxo-shiil, waxaad kaga bogan doontaan wararka dambe.
Madaxeynaha Awdal State oo ku Wajahan Degmada Baki
Galbeedka in Sharci ka Jiro Gudahana Xabad UBO ha Ogaato